Umbala Onjalo Othuthukile, Isikhala Sokugezela I-Hip Ngempela!
Ikhaya / Blog / Umbala Onjalo Othuthukile, Isikhala Sokugezela I-Hip Ngempela!
2021 / 03 / 29 UkwahlukanisaBlog 2981 0
Umklamo wangaphakathi uvame ukusekelwa umbala ukuwenza ube nokungezwani okwengeziwe, kepha maqondana nendawo yokugezela, uhlelo lombala lucishe lubambe ngokweqile, yize ukusetshenziswa kwethoni elimnyama nelomhlophe kuyinto yakudala, kepha ngokuhamba kwesikhathi yakha ukubukeka okuyisidina umphumela, okwenza kube buthuntu.
Njengendawo yangasese yokugezela, ingabe kufanele ibe nombala wayo? Impendulo inguyebo. Kulomagazini, ake sikhulume ngalesi sihloko.
U-Orange, omele isikole esikhanyayo sombala, unomoya waso omnene oyingqayizivele. Noma kumnyama noma kukhanya, noma kukhanya noma kumnyama, ithoni ngayinye inesimo sayo somusa esihlukile, ukuthi ungavumeli kanjani abantu badakwe.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka + Olintshi
Okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuzolile nokujulile, kufanelekile ukugcwalisa isikhala ngesilinganiso esikhulu; i-orange iyakhanya futhi icacile, futhi ukuhlobisa okuncane kungakhipha isimo esingajwayelekile futhi esinamandla; lapho laba ababili behlangana, kwakha isikhala esimnandi ngaphandle kwenhloso.
Ekufakeni isicelo, kunconywa ukuthi ukhethe inhlanganisela yokugcwalisa okuphansi okuluhlaza okwesibhakabhaka ne-orenji, okungabukisi ngokweqile kepha kungakhanyi kakhulu. Ingxenye yokwehlukaniswa, okuluhlaza okwesibhakabhaka njengetoni enkulu, i-orange njengombala wokugqamisa, ngakho-ke ukungena nokuphuma komdlalo kuyavumelana.
Utshani obuluhlaza + be-coral orange
Esikhaleni sokugezela sombala omnyama nomhlophe, ngotshani obuluhlaza + be-coral orange geometric block block yokugcwaliswa kombala, kungenza indlu yokugezela ikhanye futhi ithambe. Inhlanganisela yombala okhanyayo nobumnene, ukuhunyushwa kwesitayela sokugcina esithambile.
Njengommeleli wombono wezothando, ukugcwaliswa kombala obomvana kuhlala kugcwele ukumangala. Umbala okhanyayo nokukhanya, okuhle nenothando, nobumsulwa obufana nobentombazane, kukhethe njengombala omkhulu wendawo yokugezela, kuyinto ehlakaniphile ukuyenza.
Okuphinki + okumhlophe
Amathoni afudumele wombala opinki + omhlophe ukudala indawo yokugezela, ithoni isiyonke ithambile, igcwele umoya wobusha wentombazane kanye nemfudumalo. Amathayili amancane acwebezelayo anezindonga ezimhlophe ezimhlophe njengoguquko, umbala okhululeke kangaka unesimo sengqondo esizolile, unikeza abantu amandla okufudumala.
I-pink enqunu + eluhlaza okotshani
Ukungqubuzana kombala wepinki enqunu + oluhlaza okotshani kumiswe ngendlela elinganiselwa kathathu kuya kwemibili, kuletha umoya omuhle wokuvuna. Izingxenye ezimbili kwezintathu zesisekelo esiluhlaza okotshani, engeza ingxenye eyodwa kwezintathu yenhlanganisela epinki enqunu, ukugqama kombala okuqinile kukhiqiza ukungezwani okuhle kakhulu okubonakalayo, okwenza yonke indawo yokugezela ibe nobuciko obukhulu.
Okupinki + okumnyama
Okumnyama nokubomvana komunye nomunye, noma kungenjalo okumsulwa futhi okugqamile njengohlangothi olumhlophe, kepha kunokuningi kolimi olwenziwe ngezifiso. Le mibala emibili inamathiselwe ezintweni ezahlukahlukene ngaphezulu kwamathayili, inhlanganisela yokuphamba ngaphansi kokuvumelana okungalindelekile. Igumbi elinombala obomvana, obuncane obuntekenteke bangempela, obuningi bokugeleza okucacile nenhle, okuwukushayisana okumnyama kuphela ukukhiqiza intelezi yombala.
Okuphinki + mpunga
Lokhu ukuhlanganiswa kombala okudala, okudala, okuhle, ukuthandana, okuyintelezi ebonakalayo abayivezayo. Noma ngabe kuhlotshisiwe ngomunye nomunye, noma bayalingana, banentelezi yombala okungafanele ithathwe kancane.
Isikimu sombala oluhlaza
Okuhlaza, umbala obaluleke kakhulu kuphalethi, noma ngabe ukusetshenziswa kwendawo enkulu noma ukuhlobisa okwenziwe endaweni, ngaso sonke isikhathi ngentelezi yabo ukukhipha umthelela wokubuka oziqukethe, vumela abantu bathandane lapho beqala ukubona.
Umbala wokhuni oluhlaza okotshani
Umbala oluhlaza usetshenziswa njengetoni enkulu yokusabalalisa isikhala sonke, ukhipha isimo semvelo, bese usinki onombala wokhuni usetshenziswa njengegama lokugqamisa ukunambitheka okuphelele. Isethulo esinjalo sombala we-rustic nemvelo sinikeza sonke isikhala ubuhle bemvelo obungachazeki.
Okuluhlaza okotshani + Okumhlophe
Ukuhlangana kokuluhlaza okomhlophe kunomdlandla othokozisayo obonakala uvusa isimo esimsulwa somqondo enhliziyweni. Umdlalo phakathi kwalaba bobabili, ungakhathaleli inani, noma ukuhlobisa, noma kabili nohhafu, ungukubonakaliswa kokugcina kwesisa, okuqabulayo nokuthandekayo.
Okuluhlaza okotshani + Okumnyama
Kulesi sikhala esikhulu esiluhlaza, umbala omnyama usuphenduke umbala ogqamile phakathi komunye nomunye. Ukhiye ophansi futhi ungenisiwe ngaphandle kokulahlekelwa ukuma, ukwakheka kwesandulelo esivumayo, ukuze isikhala sonke sigcwale umuzwa ongapheli wesigaba esiphakeme.
Umbala obomvu oshisayo, kaningi kunalokho, uvela njengombala wokugqamisa, kepha akusho ukuthi awunakuba umbala omkhulu. Akunandaba nesilinganiso, kusenombono obukekayo obukekayo.
Okubomvu + Okumpunga
Ubomvu obunzima besitini buhlukile kweminye imibala emnyama, ithoni efudumele engathathi hlangothi enganikeza sonke isikhala umuzwa we-retro wesikhathi, ngompunga ofanayo webanga eliphakeme ojulile, okwenza umqondo ojulile futhi othandekayo wesigaba esiphakeme.
Okubomvu + okumhlophe
Phakathi kokubomvu okuhlala endaweni enkulu, ngokufakwa komhlophe, okugqamisa umuzwa wobuhle obucayi nobuhle. Kusuka kokuguqukayo kombala obomvu uye kumhlophe, kususelwa ebuhleni obunamandla be-gradient.
Ngemuva kokufunda lezi zinhlelo zombala, ingabe kutholakala ukuthi indawo yokuqala yokugezela nayo ingaba "enemibala" kangako? Ngempela, uma kuqhathaniswa nokuzimela grey okumnyama nokumhlophe, ukusetshenziswa kwemibala eminingi endaweni yokugezela kwakhiwe ngomqondo okhululekile wokubona. Inesizotha futhi ungalahlekelwa abaphezulu, ukuze abantu bajabule.
Edlule :: Umbala Wendlu yangasese ka-2021, Yisho Goodbye To The "Earthy" Aesthetic, Vumela Ikhaya Lakho "Libala"! Olandelayo: Leli yiBathroom, Lona Elisendlini Yakho Liyindlu Yangasese Nje - Izitayela Ezintsha Ekudizayineni Amakamelo Okugeza Ngo-2021